मधेशमा समावेशी लोकतन्त्रको प्रयोग धेरैको चाहना छ । तर, सत्ता प्राप्तिका लागि जातीय समीकरणको नारापनि दिने गरिएकोछ । जातीय समीकरण समावेशी लोकतन्त्रको दुश्मन हो । जातीय समीकरणले जोडिदै गएको समाजलाई छुट्याउँदै लैजान्छ । समावेशी लोकतन्त्रको लागि मधेशी जनतामा देखिएको उत्कट अभिलाषाको कार्यान्वयन नै नेपालका लागि उत्कृष्ट प्रयोग हुनेछ । यो विषयलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका ठूला पार्टीहरुले पनि उत्तिकै पछ्याउनु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आफनो राजकीय भ्रमणको कामकाज सकेर धर्मपत्नी डा.आरजु देउवाका साथ तीर्थव्रतका लागि तिरुपति र वोधगयातिर लागेका छन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग ‘अचानक’ भेटबाट शुरु भएको प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण सरकारी र औपचारिक भाषामा फलदायी रहेकोछ ।
फलदायी भ्रमणको नतीजाका लागि वृक्षमा फल लागुन्जेल पर्खिनु पर्दछ । यो प्रकृतिको सामान्य नियम हो । प्रधानमन्त्री देउवाको अहिलेको भारत भ्रमण आपसी सदभाव र सौजन्य अभिवृध्दिका लागि थियो । सवै भ्रमण लेनदेनका लागि मात्र हुँदैनन । लेनदेन, सन्धी–सम्झौता, वार्तालाप कूटनीतिका अनिवार्यता हुन । तर, छिमेकीहरु वीचको सम्वन्ध सँधै कूटनीतिक मात्र हुँदैन ।
विगत डेढ वर्षदेखि नेपाल र भारतको सम्वन्धमा निकै ठूलो विचलन आएको थियो । कांग्रेस सभापति स्व. सुशील कोइरालाको उत्तराधिकारीका रुपमा केपी ओली देशका प्रधानमन्त्री भएका वेला सम्वन्ध निकै चीसोे भयो । ओलीले गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो पटक विपरित नीति अवलम्वन गरे ।
उनले आफनो सरकार चीनतिर लहसिएको देखाएर राष्ट्रवादको झण्डा गाडे । चीनसंगको पारवहन सम्झौता सहज उपक्रम थियो जसलाई निकै वढी महत्व दिइयो । विकासका अरु कुरामा पनि चीनियाँ आश्वासन आए । त्यसलाई नारा वनाएर ओली सरकार अगाडि वढ्यो ।
नेपाल–भारत सम्वन्धमा आएकोयो विचलन दुवै देशका हितमा थिएनन । तर, यसका लागि नेपाल र भारतका दुवै सरकार जिम्मेवार थिए ।
यो पूरै प्रकरणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निकै वदनामी भयो । शायद, उनले पनि भारतको स्थायी सरकार र सुरक्षा निकायहरुको कुरा काट्न सकेनन ।
नेपाल–भारत बीचको सम्वन्ध विश्वास र भाइचाराको नभएर अविश्वासको पोको वनेकोछ । आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सवै क्षेत्रमा यो अविश्वास छाएकोछ ।
निश्चय पनि क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा स्थापितहुन लागेको भारतका सुरक्षा सरोकारहरु वढी होलान । त्यसलाई दक्षिण एशिया क्षेत्रका सवै राष्ट्रले आ–आफनै हिसावले स्वीकार गरेका छन ।
यो स्वीकार्यता नै भारतीय सुरक्षाको प्रत्याभूति हो । भारत यसभन्दा अगाडि वढेर आफनो सुरक्षाको आधार विस्तारगर्न चाहन्छ भने उसले आफना छिमेकीहरुलाई अप्ठेरो नपर्नेगरी त्यसो गर्न सक्दछ ।
छरछिमेकका जनताले भारतले यसो गर्यो र उसो गर्यो भन्ने गुनासो र गनगन जति धेरै गर्दछन भारतका लागि त्यति नै अप्ठेरो परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ ।
त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनदिनु भारत आफनै लागि पनि वान्छनीय हुँदैन । प्रम देउवाको भारत भ्रमण नेपाल र भारत वीच सदभाव निर्माणका हिसावले उपयोगी वनेकोछ । यसलाई भारतीयहरुले वुझेरमात्र पुग्दैन, नेपाली जनताले पनि वुझनु आवश्यकछ ।
नेपालमा संविधान जारी हुँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । तर, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा ओली, प्रचण्ड र वर्तमान प्रम देउवा सहित तीनजना नेता प्रधानमन्त्री भै सकेका छन ।
ओली सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको ‘गम्भीर’ चर्चा गरेपनि उसको प्राथमिकतामा निर्वाचन परेन । चुनावको चासो कांग्रेस–माओवादी गठवन्धन सरकारले नै देखाएको हो ।
गठवन्धन सरकारको नेतृत्वले देशका सातमध्ये छ प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनावसम्पन्न गराइ सकेको छ । मधेश प्रदेशको रुपमा चिनिएको दुइ नम्वर प्रदेशमा असोज दुइगते निर्वाचन हुँदैछ ।
मधेशका वृहत्तर आवश्यकता र मांगलाई संविधानले संवोधन नगरेकोमा व्यक्त भइरहेको आक्रोश अव निर्वाचनको माध्यमव्दारा अभिव्यक्त हुनेछन । अव मधेशको मुद्दा सरकार र ठूला भनिने पार्टीहरुको नाभीस्थलमा गाडिएको छ ।
मधेशको हितमा संगठित राष्ट्रिय जनता पार्टीले चुनावमा भागलिने भएपछि सरकारका धेरै समस्या समाधान हुने आशा राजनीतिक वृत्तमा चाखराख्ने सवैले राखेका छन ।
चुनावको मुखैमा आएको वाढीको विपत्तिले मधेशका जनता थप संकटमा परेका छन । वास्तवमा, मधेशमा आएको वाढीले पहाडपनि वगाएर ल्याएको छ ।
मधेशका सवै गाउँ डुवानमा परेका छन । ती सवै गाउँमा राहत पुर्याउनु पनि कठिन छ । तर, सरकारका प्रधानमन्त्री र सरकारी संयन्त्रले यसपटक मधेशको उपेक्षा गरेका छैनन । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नीरिक्षणले राहत वितरणमा केही तदारुखता पक्कै थपेको छ ।
यतिवेला चुनावको दिनसम्म वातावरण सामान्य भइसक्ने अपेक्षा राखिएकोछ । अधिकार प्रयोगका मामिलामा नेपालका जनता निकै अगाडि छन । त्यसमा पनि, नेपाली प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको प्रयोगभूमि रहेको मधेशका जनताले भोटको महत्व थाह पाइ सकेका छन ।
यो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरुले कुन पार्टी रोज्नेछन ? अहिले अनुमानगर्ने वेला भै सकेको छैन । मधेशमा समावेशी लोकतन्त्रको प्रयोग धेरैको चाहना छ । तर, सत्ता प्राप्तिका लागि जातीय समीकरणको नारापनि दिने गरिएकोछ ।
जातीय समीकरण समावेशी लोकतन्त्रको दुश्मन हो । जातीय समीकरणले जोडिदै गएको समाजलाई छुट्याउँदै लैजान्छ । समावेशी लोकतन्त्रको लागि मधेशी जनतामा देखिएको उत्कट अभिलाषाको कार्यान्वयन नै नेपालका लागि उत्कृष्ट प्रयोग हुनेछ । यो विषयलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका ठूला पार्टीहरुले पनि उत्तिकै पछ्याउनु पर्दछ ।
स्थानीय तहको चुनावका लागि जनता जति उत्साहित छन त्यत्ति नै सतर्कता आवश्यक छ राजनीतिक दलहरुको । मधेशमा सीके राउत पक्षले स्थानीय चुनाव विथोल्ने नीति लिएको छ ।
मतपत्रमा छाप नहान्ने वा मतपत्र लिएर वूथबाट वाहिरिने रणनीति लिएका लोकतन्त्र विरोधी र विभाजनवादी वागीहरुको यो कार्यक्रम एउटै मात्र वूथमा सफल भयो भने पनि त्यो खतरनाक संकेत हुनेछ । त्यतापट्टी मुख्य खेलाडीका रुपमा रहेका राजनीतिक दलका अभियन्ताहरुले ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।
मधेशमाथिको विभेद, केन्द्रीय संकीर्णता, स्थानीय नेताहरुको स्वार्थप्रेरित क्रियाकलापका कारण मधेशी युवाहरुमा आक्रोश छ । यो आक्रोशको निकासदिन सरकार र राजनीतिक दलहरुले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
राजपाले निर्वाचनमा भागलिने निर्णय गरेर मधेशमा परिवर्तनका लागि आफनो ढोका खुला राखेकोछ । अरु पार्टीहरुले पनि राजपाको यो नीति अपनाउनु उचित हुनेछ ।
विद्रोह, वगावत, अविश्वास र अनमेल राजनीतिका कारण पछाडि परेको मधेशलाई स्थानीय, प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभासम्मको चुनावको सिलसिलाले एकपटक फेरी पूर्तिलो वनाउने आशा सवैले राखेका छन । देशमा अहिले निर्माण भएका सातवटा प्रान्त भोलि दश प्रान्तमा विस्तारित पनि हुन सक्दछ वा पाँच प्रान्तमा खुम्चिनपनि सक्दछ ।
मधेश, पहाड र हिमाल सवै क्षेत्रले आ–आफनो मौलिक चरित्र बोकेका छन । त्यो मौलिकचरित्रलाई संरक्षित र सुरक्षित गरेर सवै थरी नेपालीहरु एकसाथ अघि वढने हो भने चुनौतिहरुको सामनागर्नु अप्ठेरो छैन ।राजनीतिमा चुनाव सँधै उत्सव हो । जनताको महोत्सव ।